တပ်မဒေါ်ဂျီး ကြက်ခေါ်တီး Fascists | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Best Web Awards » တပ်မဒေါ်ဂျီး ကြက်ခေါ်တီး Fascists	5
တပ်မဒေါ်ဂျီး ကြက်ခေါ်တီး Fascists
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Mar 27, 2016 in Best Web Awards, News |5comments
မြန်တြံ့တပ်မဒေါ်ကို ဂုံပြု ချဉ်တာ စာသီဖွဲ့ဖို့ မတတ်နိုင်လို့ အင်တာနက် ဝဘ်ဆိုက်မှ တဆင့်ကူးယူထားတဲ့ ပုံတွေနဲ့ ကျီး၊ ယေ၊ လှေ တပ်ဖွဲ့များကို ချေးမွမ်းထောပဏှာ ပြုလိုက်ပါသည်။ ရှုစားကြပါ…
ခင်ဇော် says: သနားစရာ တကယ်ကောင်းတာက ရှေ့တန်းက စစ်သားတွေ…!!!
ငိုပြ, ဒရမ်မာချိုးနေတာက ကွန်ပြူတာရှေ့ ဘီယာမြုံ့ စတေးတပ်ရေးတဲ့ ထောက်ပြုတ်တွေ…!!
အဲဒီ စတေးတပ်အောက်မှာ လာငိုပြနေတာက ရေပေါ်ဆီ စစ်တပ် အထက်ပိုင်းး အသိုင်းအဝိုင်းက လူတွေ….!!!
ဒီ ဟန်ဆောင် စာသားတွေ ကို ရှယ်နေ လိုက်နေ ကြွေနေ အထင်ကြီးနေတာက တကယ့် စစ်သားလေးတွေ ရဲ့ ဆွေမျိုးတွေ…!!!
မြင်နေရတာ အတော်လွဲနေတယ်… !!!
အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တ..!!
နာ့ဟာနာ ဟင်းးသွားချက်နေတာ အေးးပါတယ်… ???
Btw, ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးး အတွက် အသက်ပေးခဲ့တဲ့ မျိုးချစ်တိုင်းရင်းသားတွေကို ဒီနေရာ က အလေးပြုပြီးး
ဒီနေ့ မွေးနေ့ကျရောက်တဲ့ One of my အချစ်ဟောင်းs ကို ကျန်းမာစေကြောင်း ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်.. ငိငိငိ…!!! ???
kai says: မြန်မာစစ်တပ်ကြီးက.. မစ်ဒယ်အိစ်သွားပြီး.. အိုင်းစစ်တွေတိုက်ပေးမယ်ဆို… အခုထက်ပိုဝင်ငွေကောင်းမှာ…
ဟိုဖက်.. အိုင်းစစ်က တလ၄ထောင်ပေးမယ်ဆိုလည်း.. အဲဒီဖက်ပြောင်းပြီးတိုက်..။ အိုကေတာပဲ..။
တပ်မတခုလောက် … ကမ္ဘာ့ကြေးစားစစ်တပ်ဆိုပြီးခေါင်းစဉ်တပ်.. ဘစ်ဇနက်လုပ်ဖို့ကောင်းတယ်..။
ဦးပိုင်ထောင်ပြီး.. လုပ်ကြပုံက.. .. အရက်..ဆေးလိပ်ထုတ်လုပ်တာကနေစပြီး.. လိုင်စင်တွေအကုန်ကိုင်ထားပြန်ရောင်းစား.. နာမယ်ပျက်လိုက်သည်ဖြစ်ချင်း..။
nicolus agral says: Private military corporation
nicolus agral says: Billion dollars business
naywoon ni says: ကျုပ်​သို့သပ်​မ​ဒေါ်ဂျီးကို မ​ဆော့စကား ဘာနက်​ ဥ​ကျောင်